Wararka Maanta: Sabti, Apr 14, 2012-Dagaal Ciidamada Itoobiya iyo Xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray Deegaanno ka tirsan Gobolka Bay ee Koonfurta Soomaaliya
Dagaal Ciidamada Itoobiya iyo Xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray Deegaanno ka tirsan Gobolka Bay ee Koonfurta Soomaaliya Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Dagaal u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo xoogagga Al-shabaab ayaa maanta ka dhacay deegaanka Jiiro Mad-Sheekh oo ku dhow degmada Bardaale ee gobolka ee gobolka Bay.
Lama oga khasaaraha labada dhinac kasoo gaaray dagaalkaas, waxaana la sheegay in dagaalku uu ahaa mid gaadmo ah oo ay xoogagga Al-shabaab la beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Itoobiya.
Saraakiil u hadlay Al-shabaab ayaa sheegay inay weerarkaas ku dileen askar badan oo Itoobiyaan ah, mana jirto war kasoo baxay dhinaca dowladda KMG iyo Itoobiya oo ku saabsan dagaalka oo socday muddo saacad ah.
Dhanka kale, Al-shabaab ayaa waxay sheegtay inay deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay ay qarax kula beegsadeen gaadiid ay wateen ciidamada Itoobiya halkaasna ay ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka Uralka loo yaqaan ee ay Itoobiya caanka ku tahay.
Xaaladda ayaa hadda daggan, iyadoo deegaannadii ay dagaallada iyo qaraxyadu ka dhaceen ay xilligan ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya, lamana oga halka ay aadeen xoogaggii Al-shabaab ee weerarrada ka dambeeyay.
Gobolka Bay ayaa waxaa tan iyo bishii Feberaayo ee sannadkan oo Al-shabaab lagala wareegay degmada Baydhabo oo ah xarunta gobolkaas ka dhacayay dagaallo u dhexeeya ciidamada DKMG ah, kuwa Itoobiya iyo xoogagga Al-shabaab.
Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Maxkamadda darajada koowaad ee Gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta xukunno dil iyo xabsi isugu jira ku ridday toddoba qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen xoogagga Al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. ENG:MAXAMED XAAASHI “Qaran iyo Qabiil meel ma wada fadhiistaan, Qaran wuxuu isku keenaa dadka oo way soo ururiyaa, qabiilkuna waa wax kala kaxeenaya…” 4/14/2012 8:39 AM EST